Naijiria – Igbo Services
Afrika Agum Akwuwo Ahuike Azum Ahia Egwuriegwu Ihe Emereme Mba Uwa
Gọvanọ Soludo akatọọla ntọrọ onye ome iwu n’Steeti Anambra
Aka n’achi Steeti Anambra,Ọkanmụta Chukwuma Soludo akatọọla etu ndi ntọri si tọrọ onye omeiwu n’anọchite anya Aguata Constituency II na ụlọ nzukọ omeiwu Steeti Anambra bụ, Okechukwu Okoye. Na okwu ya site n’aka onye Chief Press…
EFCC nwụchiri Ahmed Idris maka ebubo imefu ego
Akụkọ na-akpọtụ ebe niile na Naijiria kemgbe abalị bụ nnwuchi ngalaba na-ebu agha megide nrụrụaka bụ Economic and Financial Crimes Commission, (EFCC) nwụchiri odebeego ukwu Gọọmentị Etiti n'ubochi Monde. Ụlọ ọrụ EFCC nwụchiri Ahmed…
N'ụfọdụ ebe n'ala Igbo, a na-anabata nwunye ọhụrụ n'ụzọ pụrụiche. Tupu a lụọ nwaanyị na ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, e nwere ihe dị iche iche a na-eme, nke gụnyere: Ịjụ ese: Ọ bụghị naanị ndị chọrọ ịlụ onwe ha ga-ekwekọrịta ịlụ, ndị be…
Genevieve Nnaji bụ nwaada Igbo a ma ama n'ime ejije nke aha ya na-akpọtụ na Naijiria na mba ndị ọzọ n'ihi nka ya. O sonyela n'ihe nkiri karịrị iri asaa, ma nwetakwa ọtụtụ nturuugo na Naijiria nakwa n'Afrịka n'ihe gbasara ime ejije. …
Ihe i kwesịrị ịma banyere Goodluck Jonathan
CHIDI IGWE	 May 15, 2022 0
A mụrụ ya n'ụbọchị iri abụọ nke ọnwa Nọvemba 1957. Ọ gụrụ akwụkwọ ruo nzere PhD na mmụta ịzụ ụmụ anụmanụ nke bekee kpọrọ 'zoology'Ọ bụbu osote Gọvanọ na Bayelsa State n'okpuru Diepreye Alamieyeseigha.Oge a chụturu Alamieyeseigha n'ọnwa…
Kedu ka ndị Igbo si arụ ọrụ ugbo?
Chigo	 May 14, 2022 0
Ndi Igbo bụ ndi kwenyere na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ.Ya bụ n’ihe gbasara ọrụ ugbo doro ha anya nke oma,Ugbu a bụ oge ọrụ ugbo. Kedu ka ndị Igbo si arụ ọrụ ugbo? Ọtụtụ mgbe, ndị ikom ha na-ekpochasị ala ma dozie ala ahụ,…
Onyeisiala Buhari na-asi ndị minista na-apụ apụ n’ọkwa nke ọma.
Chigo	 May 13, 2022 0
Onye isi ala Muhammadu Buhari agbaala ndị otu Federal Executive Council (FEC) na-apụ apụ, na-ekwusi ike na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu n'ime ha akwadola nke ọma iji chọsie ike ị nweta ụlọ ọrụ nhọpụta dị elu, gụnyere Ụlọọrụ President. N'ikwu…